रामलीला :: Setopati
वीरेन्द्र चौधरी कात्तिक २
कोरोना फोबियाले गर्दा एक्लै टोलाउने बानी बसेको थियो। कौसीको रेलिङमा हातको अडेस लाएर आज पनि एकोहोरो टोलाउदै थिएँ।
'फेरि के सोच्दै हो एक सुरमा?' श्रीमतीको प्रश्नले मेरो एकाग्रता एकाएक भंग भयो।
'किसी की बहुत याद आ‘रेली है' मुन्ना भाइको नक्कल गर्दै भनेँ। जिस्किने मुडमा मलाई टुटेफुटे हिन्दी बोल्न मन पर्छ।
'कोइ गर्लफ्रेण्ड है क्या?' श्रीमती पनि जिस्कन थाली।
'हे कोइ स्पेसल' मैले सहजताका साथ भनेँ।
'साँच्चै हो की क्या हो?' उनी शसंकित भइन्। अनुहार अँध्यारो पारिन्। हामी दुई जनाको जिस्किने मुड अफ भयो। त्यसपछि संवाद सुरु भयो।
'कहाँ की हो?'
'धनगढी पार्क छेउकै।'
'भेटघाट हुन्छ होला नि?'
'नभेटेको २५ वर्ष भयो' घर थाहा छ तर भेट हुन सक्दैन रे।'
'किन हुन सक्दैन?'
'कोरोनाले गर्दा आउन सक्दिनन् रे।'
'मै आफै भेट्न जान्छु।'
उनी जंगिइन् 'खुरुक्क बाइक निकाल्नु नि, किन ढिला गर्ने।'
प्रसंग निकालेमा पछुतो भयो। आज्ञाकारी भएर बाइक स्टार्ट गरेँ। पछाडि उनी बसिन्। बाइक सिटमा पनि भौतिक दूरी कायम गरिन्। कर्के नजरले हेरिन्। घरबाट पार्कसम्म दूरी धेरैमा पाँच मिनेटको बाटो थियो। उपमहानगरपालिकाको पदवी उपमा पाएको धनगढीको मुख्य बाटो खाल्डा-खुल्डीले धनगढी बजारलाई गिज्याइरहेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालसम्मको कुरुप बाटोमा बाइक उफ्रिरह्यो। उनी भने अपरिचित झैँ शान्त बसी रहिन्। पार्कमोड पुगेपछि बाइक पार्क तिर मोडेँ। पार्क छेउ अलि अगाडि बढेपछि कभर्ड हल जाने पुरानो गेट भित्र छिरें। कभर्ड हल पुरै पहेलो रंगले कभर गरिएको थियो। छेउमा पहेंलै रङले पोतिएको सानो मन्दिर थियो।
मन्दिरको ढोका खुल्ला थियो। मन्दिर भित्र धुलाम्य हनुमान जि विराजमान थिए। शरीरका रंग खुइलिदै गएका हनुमान जिका आँखा निरास देखिन्थे। भगवान रामका परम भक्त हनुमानले 'जय श्रीराम' लेखिएको दोसल्ला भने अझै ओढेकै थिए। हनुमान जी लाई ढोग्दै भनेँ–
'यी हनुमानजी साक्षी छन्। मेरो बारेमा सबैकुरा यिनैलाई थाहा छ। यिनलाई सोध।'
'ढुंगाका हनुमानले के सुनाउँथे र। आफैले ओकेल्नु नि' श्रीमतीले खुट्टा भुइमा बजारिन्।
'मेरो एउटा आग्रह छ। मेरो कथा धैर्यपूर्वक सुन। त्यसपछि जे–जे गर्नुछ गर्नु श्रीमती जी' मैले फकाउन खोजें।
'नभन्नु मलाई श्रीमती।'
मन्दिर अगाडिको घाँसे चौरमा उनी थचक्क बसिन्। उनको छेउमा गएर म पनि बसेँ। रिसाएर उल्टो फर्किन्। मैले एकोहोरो कथा सुरु गरेँ।
बच्चा हुँदै उनीसँग चिनजान भयो। चिनजान गराउने माध्यम बडा दशैँ बन्यो। ८–९ वर्ष हुँदादेखि नै भेट्न सुरु गरेँ। यो क्रम म १६ वर्ष हुँदासम्म जारी रह्यो। २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो। यही युद्धकालमा मैले धनगढीको बसाइ छोडेँ। त्यसपछि भेटघाट हुन छाड्यो।
अहिले आएर म फेरि घुमीफिरी धनगढीमै आइपुगको छु। युद्धकालमा जन्मस्थान छोडेँ। कोरोना कालमा पुनः जन्मस्थान फर्किएको छु। जीवन 'फिरफिरे' जस्तै भनेर बुद्धि सागरले त्यसै भनेका होइन रहेछन्। अहिले हिसाब गर्दा ब्रेकअप भएकै २५ वर्ष भइसक्यो।
उनीसँग पो ब्रेक अप भयो। उनले सुनाएका कथाहरु ब्रेकअप भएनन्। जति जति नजिक दशैँ आउँथ्यो, उति उति मनमा धैर्यताको बाँध भत्किदै जान्थ्यो। उनलाई भेट्न मन औडाहा भएर आउथ्यो। घटस्थापनाको साँझदेखि विजया दशमीको रातसम्म नविराइकन उनलाई भेट्न आउँथेँ।
भेट्ने समय र स्थान सधैँ एउटै हुन्थ्यो। समय राति आठ बजेदेखि १२ बजेसम्म, स्थान पार्क छेउको कभर्डहलको खुलामञ्च। 'कुनै दिन दिउँसो पनि भेटौँ न' मैले भन्थेँ। कार्तिक शुक्ल पक्षको रात उनलाई निकै मन पर्छ रे। टह-टह जुन हेर्दै कथा भन्न धेरै रमाइलो लाग्छ रे। त्यसैले राति मात्र भेट्ने रे। मैले भन्दै गएँ।
यही चौरमा बसेर कथा सुरु गर्थिन् उनी। कथा सुरु गर्न अगाडि भन्ने गर्थिन् 'बोलो राम चन्द्र की, जय।'
कथाको बीच- बीचमा पनि भन्ने गर्थिन् 'बोलो राम चन्द्र की! जय।'
र कथाको अन्त्यमा पनि भन्ने गर्थिन् 'बोलो राम चन्द्र की! जय।'
मैले नि उनकै स्वरमा भन्थेँ 'जय।'
घटस्थापनादेखि दशमीसम्म उनले नयाँ नयाँ कथाहरु बडो रोचक तरिकाले सुनाउँथिन्। उनको कथा भन्ने तरिका र हाउभाउ नै मलाई मन पर्थ्यो। लेख्न चाहिँ बाल्मिकीले लेखेको हो रे, कथा भने उनी सुनाउँथिन्। उनले सुनाउने कथाको शिर्षकलाई 'काण्ड' भन्थिन्।
दश दिनको अन्तरालमा बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्य काण्ड, किचकिन्धा काण्ड, सुन्दराकाण्ड र युद्धकाण्डका कथाहरु पूरा गर्थिन्। धनुष वाणमा निपूर्ण रामको कथाले मलाई यति प्रभावित पार्थ्यो की बिहान मैले बासको धनुषवाण बनाएर भ्यागुताहरुको शिकार खेल्न निस्कन्थेँ। माइली रानी कैकयीको इर्ष्या र राजा दशरथको लाचारीपनले रामलाई बनवास जानुपर्दा दुःख लागेर आउँथ्यो।
रावणको बहिनी सुपर्णखाको नखरा देखेर मलाई रिस लागेर आउँथ्यो। रिस मलाई मात्र होइन, लक्ष्मणलाई झनै उठ्दो रहेछ। सुपर्णखाको प्रेम प्रस्ताव नमान्दा लक्ष्मणले उसको नाक र कान काटीदिएपछि नै रावणसँग दुश्मनीको बीउ रोपिएको उनी बताउँथिन्। बदला स्वरुप सीतालाई अपहरण गरेर लंकामा बन्दी बनाउँछन्।
कथा सुन्दा–सुन्दा कहिले काहीँ मलाई दिक्क लागेर आउँथ्यो। उनी चंचल स्वभाव कि थिइन्। मलाई हँसाउन उनी नाच्न थाल्थिन्। त्यतिखेर धनगढीमा 'कमल–डान्स' निकै चर्चित समूह थियो। त्यही समूहको हिन्दी आइटम गीतमा ठुम्का लगाउँथिन्। मान्छेहरुको भीड छिचोल्दै कहिले बदाम खुवाउँथिन् त कहिले रोटे पिङमा सयर गराउँथिन्।
खुला मञ्चमा निर्मित विभिन्न भगवानहरुको दर्शन गराउँथिन्। दशैँभरि श्रद्धालुहरु यिनै मूर्तिहरुकोमा घुइँचो लगाउँथे। इन्डियन कालीगडले बनाएका माटाका मूर्तिहरु साँच्चै जीवन्त देखिन्थे। पाँच वटा मूर्तिलाई चिनाउदै भन्थिन्- गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती र कार्तिके। भगवान दुर्गा बाहेक चारै भगवान आ-आफ्नो बाहनमा शान्त मुन्द्रामा देखिन्थे। बीचमा उभिएकी दशहाते दुर्गा भने निकै क्रोधित देखिन्थिन्।
बडेमानको सिंहमा सवार दुर्गाको हातमा भएको त्रिशुलले कालो जीउ र रातो जिब्रो भएको डर लाग्दो राक्षसको छातीमा प्रहार गरेको मूर्ति दशैँको लागि विशेष मानिन्थ्यो। उनी भन्थिन्– 'देउताहरुलाई दुःख दिने दानव महिशासुर यिनै हुन्। यही दानवलाई परास्त गर्न भगवान विष्णुले दुर्गाको रुप धारण गरी दशमीकै दिन परास्त गरेकोले विजया दशमी हुन गएको हो रे।'
कथा अगाडि बढ्दै जाँदा, नयाँ–नयाँ पात्रहरु पनि थपिदै जान्थे। कहिले हनुमानको कथा, कहिले बाली र सुग्रिवको कथा। भातृत्व सम्बन्ध दिने विभिन्न पात्रहरुको उदाहरण दिन्थिन्। यही उदाहरण दिइरहँदा मैले बीचमा भन्थेँ, मेरा पनि दाजुभाइहरु छन्। हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो सम्बन्ध भन्ने?
'राम, लक्ष्मण र भरत जस्तै?'
'बाली र सुग्रीव जस्तै?'
'रावण र विभिषण जस्तै?'
उनी मुस्कुराउँदै भन्थिन्- 'महाशय! मैले त्रेता युगको कुरा गरेको हो। यो कलियुग हो। आफ्नो मूल्यांकन आफै गर।'
सप्तमीदेखि कथाको क्लामेक्स बढदै जाँदा नवमी पुग्दासम्म युद्धकाण्डको भिषण युद्ध सुरु हुन्थ्यो। कालरात्रीमा सुरु भएको युद्ध दशमीको दिन पनि जारी रहन्थ्यो। लंकामा हमला गरेका रामले अन्ततः विजयी प्राप्त गर्दै जान्छन्। लंकाका थुप्रै सेनाहरु शहिद हुन्छन्। रामको अचुक वाणले दशमुखे रावण गर्लाम्म ढल्छन्।
रावण ढलीसकेपछि पनि राम चौरमा दौडिन्छन्। चौरमा बनाइराखेको भिमकाय रावणको पुत्लामा अग्निरुपी वाण प्रहार गर्छन्। पटाका जडित रावण बल्न सुरु हुन्छ। क्षणभरमै पटाकाका आवाजहरु बम फुटे जस्तै पड्किन थाल्छन्। आकाशमा आतिसबाजी हुन्छ। म भीडबाट बाहिर निस्किन्छु। आतिसबाजीको रंगीन प्रकाशमा उनले मलाई बाई–बाई भनेर हात हल्लाउँछिन्।
म पनि हात हल्लाउँदै भन्छु- 'अर्को दशैँमा भेटौँला है'
त्यसपछि उनी निभेको आगोसँगै खरानीमा बिलिन हुन्छिन्।
'मेरो कथा सकियो। तिमीलाई केहीँ भन्नु छ?'
एकनासले उल्टो फर्केर कथा सुनीरहेकी श्रीमती म तिर फर्किन्छिन्। अनुहार उज्यालो पार्छिन् अनि भन्छिन्- 'रामायणको रामलीला पो रहेछ, मैले त अरु नै सोचीरहेको थिएँ।'
जिस्किदै मैले भनेँ- 'रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको रामलीला होइन नि।'
त्यसपछि बाइक स्टार्ट गरेँ र हिड्नु अघि भनेँ- 'बोलो राम चन्द्र की! जय!'
उनले पनि भनिन्- 'जय!'
(लेखक राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, धनगढी शाखाका निमित्त कार्यलय प्रमुख हुन्।)